အမျိုးဂုဏ်ကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အမျိုးဂုဏ်ကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့
Posted by ရွှေဘိုသား on Jan 7, 2012 in My Dear Diary | 13 comments
ကျောင်းတက်တုန်းက အတွေ့ကြုံလေးတစ်ခု အကြောင်းပြုပြီးပြောရအုံးမယ် စာမေးပွဲ၇က်ကြီးပေါ့ဗျာ စာမေးပွဲဖြေရမှာမို့ အေးအေးဆေးဆေးရှိမဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ တစ်ယောက်ထဲထိုင် ကောင်မလေးတွေကိုကြည့်နေတာ မှားလို့
စာကြည့်နေတာ ဒေးသမားတွေ ကျောင်းအပ်လို့ရတဲ့အချိန်ကိုးဗျ ဒေးကျောင်းသူတွေဗျာ တစ်ဖွဲ့ကြီးဆိုင်ထဲဝင်လာရော သူတို့ပြောနေတာတွေကြားရတာ ကျောင်းအပ်ပြီးပြန်လာတာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဝင်နားတာပေါ့ ဆိုင်ရှင်ကလည်းသူတို့နဲ့
တော်တော်ရင်းနှီးတယ်ဗျာ ကြည့်ရတာ သူတို့ဒေးတက်တုန်းက ဒီဆိုင်ရဲ့ဖောက်သည်တွေထင်ပါတယ် ဆိုင်ထဲလည်းရောကရော ကိုယ်တွေရှိနေတာတောင် ဂရုမစိုက်ဘူးဗျာ သူတို့ထိုင်တဲ့ဝိုင်းမှာပဲ ထဘီတွေကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ရွာသားတွေ
တလွဲမတွေးနဲ့နော် အောက်မှာ ဘောင်းဘီတွေပါတယ် အလှပြလို့ရတဲ့ဘောင်းဘီပေါင်လည်လောက်တိုတာကကတစ်ချို့ အရှည်ကတစ်ချိုပေါ့ပြောတာနော် သူတို့ဝိုင်းကိုသိပ်ဂရုမစိုက်မိတော့လည်း ဒါပဲသိတယ်ဗျ
ဟဲဟဲ သိတယ်မလား ငယ်သေးတယ်လေ သေချာတာကတော့ စာကြည့်လို့မရတော့ဘူးဗျ စာထဲကိုစိတ်မပါတော့ဘူိးု ဘာကြောင့်လည်းဆိုပြီးတလွဲမတွေးမတွေးနဲ့နော် ပြောပြီးသား ငယ်သေးပါတယ်ဆို ဘာတွေတွေးနေသလဲဆိုတော့ဗျာ
မြန်မာမိန်းကလေးတွေဖြစ်တာပဲဗှာ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ ထဘီလေးတွေ ၀တ်ထားတာက ပိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ဘာဖြစ်လို့များ ဒီလိုခဏပိုင်းလေ လာရတာတောင် ဖော်ချင်ပြချင်နေကြတာလည်းဆိုတာ စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူးဗျာ
အင်းသူတို့မှာလည်း ရှိတာလေးတော့ ပြချင်မှာပဲလို့ စိတ်ကလည်း အကောင်းမြင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတော့ပိုဆိုးသဗျ သိတယ်မလား ကိုယ်ကလည်း မြန်မာစာမေဂျာဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ ယဉ်းကျေးမှုလေးတော့ ထိန်းသိမ်းစေချင်တာပေါ့
ကိုယ်တွေရှေ့မှာပဲ ထဘီချွတ်ချတာကတော့ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံပေါ့ အရှက်မရှိတော့တာကိုပြောတာပါ ဘောင်းဘီတိုဝတ်လာတာကြွားချင်တာထားပါအုံး အိမ်သာထဲ (သို.)လူကွယ်ရာမှာ လုပ်ပေါ့ဗျာ အရှက်ကရှိကိုမရှိတော့ဘူး ရွာထဲက ချစ်ကိုကြီး
ပြောသလိုပြောလိုက်မယ် လခွီးတဲ. စောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး ကျောင်းထဲမှာတောင် လည်ဟိုက်လေးတွေကို တော်တော်များများက ၀တ်လာကြသေးတယ်ဗျာ သူတို့ကလည်း ယောင်္ကျားလေးတွေ အသက်ပိုရှည်အောင် ပါရမီဖြည့်ပေးတာလားတော့မသိဘူး
ရွာထဲက မိန်းကလေးတွေ အကုန်လုံးတော့ အားနာပါရဲ့ ရွာထဲမှာလည်း အဲဒီလောက် ရိုင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်မထင်ပါဘူး ကျောင်းလေးခဏတက်တာတောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြတော့ဘူး ရှက်ဖို့တော့ကောင်းသားမြန်မာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေပြိးတော့
ဟိုမင်းသမီးလေးရှိသေးတယ် ၀ိုင်းပုခိုင်ဖော် ဆိုလားဒါကသူငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့နံမည်ပါ အမှန်က ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းပါ ၀ိုင်းတာလည်းဟုတ်ပါတယ် မျက်နှာလေးကိုပြောတာဖြစ်လောက်ပါတယ်နော ပုတာလည်းလက်ခံတယ်ဗျာ
ဖော်ဆိုတာကတော့ ရှိတာလေး သိမ်းမထားပဲ အမြဲဖော်ထားလို့တဲ့ အင်း သူတို့ပြောသလိုကျတော့လည်း ဟုတ်သားပဲဟ အင်တာဗျူးတွေဖြေလိုက်ရင်တော့ကောင်းသားဗျ မြန်မာ့ဝတ်စုံလေးတွေ မြတ်နိုးပါတယ်တဲ့ ၀တ်လိုက်လို့ရင် တော့တလွဲဗျ
သူတို့ဆိုပိုပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းသင့်တာပေါ့ လူအများအားပေးနေတဲ့ မင်းသမီးလေးတွေအဆိုတော်လေးတွေဗျာ သူတို့ကိုအားကျအတုယူနေတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိမှန်းမှမသိတာ ကောင်းတဲ့နေရာ အတုယူရင်တော်ပါသေးရဲ့
မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ချို့ အကျင့်တွေတော်တော်ပျက်စီးလာကြတယ်ဗျ ၀တ်တာစားတာ နေတာထိုင်တာမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ တော်တော်လေးကို ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်လာကြတယ် စိတ်မကောင်းစရာပဲ
အခုတလော အင်တာနက်မှာ ပျံ့နေတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင်လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ် မြန်မာကောင်မလေးတွေ မလေးမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံများများရတဲ့ နီပေါ ကလားတွေနဲ့နေကြတာ နီပေါတွေက အလုပ်ထဲမှာကျတော့ မြန်မာအမျိုးသားတွေကိုနှိမ်
စကားနာထိုး မင်းတို့မြန်မာဟာမတွေ ဘာညာပြောပေါ့ ဒါနဲ့ရန်ဖြစ် သိတယ်မလား မြန်မာပဲလေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်မလေးတွေမှားနေပါစေ အမျိုးထိဓားကြည့်ဆိုတဲ့အမျိုးကိုးဗျနော ရိုက်လိုက်လို့ မြန်မာအမျိုးသားတစ်ချို့ အချုပ်ကျ
ထောင်ကျဖြစ်နေတာတွေကြားသိရတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျ ပထမအဲဒီဗွီဒီယို ဖိုင်လေးကြည့်တုန်းက နားကြပ်မတပ်သေးပဲကြည့်ပြီး မြန်မာကောင်မလေးတွေကိုရိုက်နေတာကြည့်ပြီး
မြန်မာအချင်းချင်းအဲဒီလောက်ထိ မနှပ်စက် သင့်ပါဘူးလို့နှုတ်ကရေ၇ွတ်မိသေးတယ်အသံပါနားထောင်ကြည့်မှသိရတာ သတ်တောင်သတ်ပစ်သင့်တယ်ဗျာ ဘယ့်နှယ်ဗျာ မလေးရှားသွား အလုပ်လုပ်ဆိုပြီးပိုက်ဆံများများရတဲ့ ကုလားနဲ့မှ
နေရတယ်လို့ တိုင်းပြည်နံမည်ပျက်တယ် အမျိုးသိက္ခာကျတာပေါ့ ကလားနဲ့မှ မဟုတ်ဘူး အဲဒီလိုလုပ်စားချင်ရင် ဒီနိုင်ငံလည်းလုပ်စားလို့ရပါတယ် သူများနိုင်ငံသွားလုပ်စားတော့ နိုင်ငံသိက္ခာကျတယ်လို့ထင်တယ်
ရိုက်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားတွေက နင်တို့ မရှက်ဘူးလား ငါတို့အလုပ်ထဲမှာ ဒီလိုအပြောခံရတယ် နဲ့ပြောပြောပြီးရိုက်နေတာ သတ်တောင်ပစ်သင့်တယ် ရိုင်းရိုင်းပြောလိုက်အုံးမယ် အဲဒီလိုဟာများဗျာ ပိုက်ဆံများများရချင်ရင် ဒီနိုင်ငံမှာလည်း
ပိုက်ဆံပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် အဲဒီဗွီဒီယို ဖိုင်လေးကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေသိမှာပါ အရိုက်ခံရတဲ့နှစ်ယောက်က သူတို့တင်အားမရလို့ အသစ်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကိုရော မြူဆွယ်ကြတာတဲ့ဗျာ သူတို့နဲ့ပေါင်းဖို့အဖော်စပ်တာတဲ့
အိမ်ကမိဘတွေသိလို့ကတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး ကိုယ်တွေကတော့ ဘာမှမတော်တာတောင် သတ်ပစ်ချင်တယ်စာဖတ်သူရောဘယ်လိုများခံစားရမလဲတော့မသိဘူး တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်လေးဗျာ အရှက်လည်းကွဲတယ် လူမျိုးလည်း သိက္ခာကျတယ်လို့ထင်တယ်
စာဖတ်သူလည်းထင်သလို မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ် အမျိုးဂုဏ်ကိုတော့ ထိန်းသိမ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ် အကို ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေက ပြောလဲမောတာပဲအဖတ်တင်တယ်။
မိ ဘ တွေကလဲ သားသမီးတွေကိုဆုံးမရကောင်းမှန်းမသိ…အရပ်တကာ၊ရပ်ကွက်ထဲလိုက်ပြုံးပြဖို့လောက်ပဲ
အသုံးကျတာ မျိုးစေ့မမှန်ပင်မသန်တာလို့ပဲယူဆရမှာပဲ။ကိုယ်တွေကသာ သူတို့အစား လိုက်စိတ်ပူပေးနေရ
ကြားရနားဝမသက်သာ။ မြင်ရရင်ဝမသက်သာ။ မင်းသမီးတွေကစလိုက်တာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကြီး ကတိုတက်သွားတာပါပဲ။ မင်းသမီးတွေအရင်နှိပ်ကွတ်ရမှာ။ မင်းသမီးကြီးကြီးငယ်ငယ်အားလုံးနီးပါးမြင် လို့ကိုမကောင်းအောင်ဖြစ်နေကြတာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တော့ဝတ်ထားတာတွေကြည့်ပြီးတော်တော်အံ့သြသွားတာ။ သူတို့တွေဒါမျိုးလဲဝတ်တတ်သေးတာကိုးလို့။ တကယ်ပြောတာပါ။ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ မှာတောင်ဒီလောက်မယဉ်ကျေးပါဘူး။
မလေးရှားဗီဒီယိုအကြောင်း ဒီမှာတနေရာမှာ တင်ထားတယ်.. ကိုရင်ရွှေဘိုသားရေ..။
အဲဒါကို.. တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေက.. ဘယ်သူ့ပြပြ.. ရာဇ၀တ်မှုလို့သတ်မှတ်ကြတာပါ..။
နည်းနည်းနောနော ပုဒ်မလည်း မဟုတ်ပါဘူး.။ ထောင်ထဲတန်းသွားရမဲ့.. လက်ရာတွေပါ..။
တကယ်လို့.. ကျုပ်ကသာလက်လှမ်းမှီရင်.. အဲဒီရိုက်နှက်သူတွေကို.. တရားရေးတင်ပေးလိုက်ချင်လောက်အောင်.. စိတ်ပျက်မိတာပေါ့…။
အဲဒီယောက်ျားတွေမှာ.. ဘယ်အမျိုးတမီးတယောက်ကိုမှ.. ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်ဖို့.. ဆုံးမဖို့.. အခွင့်(Rights)မရှိပါဘူးနော..။
အဲဒီလို မြန်မာအမျိုသမီးတယောက်ကို..မြန်မာ ယောက်ျားတွေ.. အုပ်စုလိုက်ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်..(အဲဒီယောကျာ်းတွေ.. တရားရေးအရ.. အရေးယူမခံရမချင်း)… မြန်မာတမျိုးသားလုံး..ကမ္ဘာအလယ် အလွန်အရှက်ရစေပါတယ်လို့…။
သူကြီးပြောတာ မှန်ပါတယ်။ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်သူတွေက ပိုအပြစ်ကြီးသွားပါပီ။
ကိုရွှေဘိုသားပြောသလို အဖော်အချွတ်လေးတွေပါလာလေတော့ အမျိုးသမီးများအဖို့ သတိ
ကြီးစွာထား ပြင်ဆင်ကြဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဝတ်တာ စားတာတွေ တော်တော်ဆိုးလာတာ အမှန်ပဲ ကိုရွှေဘိုသားရေ …
ဒါတောင်မှ သူတို့က အဲဒီလိုဝတ်မှ ခေတ်မီတာ ဆိုပဲ …
တချို့မိန်းကလေးတွေဆို တော်တော် အတိုကြိုက်ကြတယ် ထင်ပါ့ … တိုသမှ အင်း …. တော်တော့်ကို တိုတာ … စကတ်တို့၊ ဘောင်းဘီတို့ပေါ့ ဗျာ။
သူတို့တွေ အနေနဲ့ ဝတ်တဲ့စားတဲ့အခါ၊ နေထိုင်ပြုမှုတဲ့ နေရာမှာ “ငါတို့ဟာ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေပဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတော့ ရှိစေချင်တာ အမှန်ပဲ။
ပြောရရင် အရင်ခေတ်က အရှက်လုံအောင်ဝတ်တာ အခုကအလုံဝတ်တာကိုရှက်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေရောဗျာ
သူကြီးပြောသလိုတော့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျနော်လည်း စစချင်းကြည့်တုန်းက တော်တော်ဒေါသဖြစ်ပါတယ်
ကောင်မလေးကို အဲဒီလောက်ထိရိုက်နှက်နေလို့ပါ အဲဒီတုန်းက ကြည့်ရုံပဲလေ အသံက သိပ်မကြးရဘူး လိုင်းကြောင့်ပေါ့ နောက်ပိုင်းအသံပါကြားရတော့ ပြောသံတွေကြားပြီးကိုယ်ပါရောပြိး ဒေါသဖြစ်တယ်ဗျ
အဲဒီကောင်လေးတွေရိုက်တာ မျက်နှာပျက်တာ မြန်မာအမျိုးသားတွေ မျက်နှာပျက်တာက ကောင်မလေးတွေလုပ်ရပ်လောက် မျက်နှာမပျက်ဘူးလို့ ကျနော်ကတော့ ထင်တယ်ဗျာ
သူကြီးက တရားဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံအမြင်နဲ့ဆိုတော့ သူကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်
အဲဒါ သူတို့ တွေ ကို
အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုး မထားတော့တဲ့ ဘဝ ရောက်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့
သူတို့ နဲ့ ဆက်နွယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတွေ ရဲ့ သောက်သုံးမကျတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်မို့ ကွ…
အင်းးးး ဒီ VDO ကိစ္စ အဘ ဝင်ပြောတော့မယ်နော် ။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ် အရှက် သိက္ခာ အတွက်
ရိုက်နှက် ဆုံးမတယ် လို့ပဲ ထားပါတော့ ။
အဘ တော့ မထင် မထင် လုံးဝ မထင် ။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ် အရှက် သိက္ခာ အတွက် မဟုတ်ပဲ
သူတို့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ Personal ဂုဏ် အရှက် သိက္ခာ အတွက်
သက်သက် ကြားကောင်းအောင် အကြောင်းပြပြီး ရိုက်တာပဲ ဖြစ်မှာပါ ။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာ အတွက် ကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်ပြီး မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကို
သူရဲကောင်း ယောက်ကျားရင့်မ တစ်အုပ်ကြီးကဝိုင်း ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်း ၊
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာ အတွက်
ငါမှန်တယ်ထင်တာ လုပ်တယ်ကွ ၊ လုပ်ပြီးပြီကွ ဆိုပြီး ၊
ရင်ကော့ပြီး ရဲစခန်းမှာ အဖမ်းခံပြစမ်းပါ ။
ယောက်ကျားကောင်းဆိုရင် မတရားတာလုပ်ရဲပြီးရင် ခံရဲရပါတယ် ။
အဲလိုဆိုရင်တော့ မှန်သည် မမှန်သည် ၊ တရားသည် မတရားသည် ၊ ခဏထား ။
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာ ကိုယ်လုပ်ရဲတဲ့ ယောက်ကျားကောင်း တစ်ယောက်အနေနှင့်
မြင်ပေးလို့ ရပါတယ် ။
အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ၊
အားနည်းတဲ့သူကိုသာ အနိုင်ကျင့်ရဲတဲ့ ၊
ဖာသည်မ ကိုကျ ပါးရိုက်ရဲပြီး ရဲ ကျတော့ —ီး စုတ်ပေးတတ်တဲ့
ဖာခေါင်း သာသာ အကောင်တွေလို့ပဲ မြင်ရပါလိမ့်မယ် ။
သူကြီး Kai အနေနှင့်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရောက်နေတဲ့
မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ်တွေ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အနိုင်ကျင့် စော်ကားခံရတာ ကို
( Whether come from Domestic or Foreign )
ကာကွယ်တဲ့အနေနှင့် တရားမျှတမှုကို ဆောင်ကြည်းပေးတဲ့ အနေနှင့်
အဲဒီ VDO File နှင့် ဖြစ်စဉ် အကျဉ်းကို Royal Malaysian Police Force ကို
( —http://polismalaysia.brinkster.net/Royal%20Malaysian%20Police%20Force%20-%20Contact.asp— )
သတင်းပို့ပေးဖို့ တောင်းဆို / တောင်းပန် ပါရစေ ။
ကျွန်တော့်မှာတော့ ရွှေမြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးကို ပြန်ရောက်နေတော့
Super Slow Connection နှင့်မို့ လုပ်ခွင့်မသာလို့ပါ ။
နောက်ထပ် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်လိုတဲ့
မြန်မာ့ သားကောင်း ရတနာများကိုလည်း ပြောကြားလိုတာကတော့
မိဘ ကျမ်းမာရေး စားဝတ်နေရေး အစရှိသဖြင့် အတွက်
( မိဘ ဆေးမကုနိုင်လို့ သေမှာကို ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်မကြည့်ရက်တဲ့ )
မလုပ်ချင်ပေမယ့် ရွေးစရာမရှိပဲ မိမိရဲ့ ဘဝ တစ်ခုလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး
ဖာသည် လုပ်စားနေရတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတွေ အဘ သိတာထင် မနည်းရှိပါတယ် ။
ပါးစပ်လေးနှင့်သာ လွယ်လွယ်လေး အမျိုးချစ်မပြကြပဲ
အဲဒီ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတွေကို လက်တွေ့
အမှန်တကယ် အမျိုးချစ်ပြကြပါအုန်းလို့ ။
အဲဒီ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတွေကို ကူညီတာဆိုလို့
နိုင်ငံခြားက NGO အဖွဲ့ တွေပဲတွေ့ဖူးတယ် ။
ပြည်တွင်းက အမျိုးချစ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးရှင်များ ကတော့ ၊
အဖွဲ့လိုက် ကူညီတာတော့ မမြင်ဖူးဘူး ။
ဘယ်မိန်းကလေးမှ အားယားအနစ်နာခံပြီး ပြည့်တန်ဆာ မလုပ်ပါဘူး
အမျိုးသမီးကောင်းတွေ လမ်းဘေးရောက်ကုန်တာ တပြုံကြီး
အင်း ကံတရားပေါ့ အဘရယ်
ပြောသာပြောသည် ဤမည်ကို မြန်မာပြည်ဟုခေါ်သည်
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကိုက အပြစ်ရှိသူလို့ သတ်မှတ်တဲ့သူကိုဆော်ဘို့ ကြိမ်လုံးရှိတယ်
( ဘုန်းတော်ကြီးက ကြိမ်လုံးနဲ့စော်တဲ့လောက်ထိကိုလည်း သားကလိမ္မာတာ )
သားကတော့ ဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်တာကို လက္ခံတဲ့ဖက်ကမပါဘူးဗျ
သားရဲ့ဘောစိကိုလည်း ဒီအကြောင်းတွေကိုပြပြီ ခြေတွေလက်တွေနဲ့ အပီရှင်းပြပါတယ်
ဘောစိကတော့ ခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ အောက်ကလိုမှုတ်ပါတယ်
they are ladies man ဒီကောင်တွေကို အဝီစိသွားခိုင်းလိုက် တဲ့
သူ့နှမသားခြင်းသူဒီလိုဘဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် လူ့လောကသားတစ်ယောက်အနေနှင့် NO ပါ
သိပ်ရှက်လွန်းလို့ မခံစားနိုင်ခြင်းအတိုင်းထက်လွန်ကဲလာရင် အပြတ်ရှင်းဘဲ
ဒီနေရာမှာ အဲ့သည်အကောင်မတွေ ( နည်းနည်းတင်မယ်နော် အိပ်စကျူးမီ )
က ဆိုင်ရာဒေသခံတွေနဲ့ အပီလိုက်ကုန်းပြီး မြန်မာပြည်သားတွေကို ဒုက္ခပေးရင်တော့ တစ်မျိုးပါ
တစ်ချို့ရှိတတ်ပါတယ် ဒေသခံလူမိုက်တွေ ရဲတွေနဲ့ ဘာညာကွိကွပြီး ဘာညာကွိကွလိုလိုမှိုလိုလို လုပ်တတ်တယ်
( အခြေနေကြည့်ရတာ ကိုယ်၇ှက်ရလောက်မဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးထင်တာဘဲ ( အထင် )
ဒီကိစ္စကတော့ မနာလိုလို့ လုပ်တယ်ဘဲထင်မိတာဘဲ
လူမျိုးစု ကိစ္စနဲ့ နည်းနည်းလေးပတ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်
သားပြောတာကို ဘောကောင်းကောင်းနဲ့ ခံစားကြပါ
မြန်မာပြည်သား ဘာလူမျိုးလို့ခေါ်သဒုံးဗျ ဂေါ်ရခါးလား ဘာလား ( အချို့ ) တော်တော်အချိုးမပြေဘူး
မပြေတာမှ ဘာညာကွိကွလိုလို မှိုလိုလို ကိုလုပ်တာ
( မှတ်ချက် ။ ။ တစ်ဦးတည်းသုံးစွဲရန် တီထွင်ထားသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုံးဝသုံးစွဲခွင့်မပြု )
သူတို့ကိုယ်သူတို့ နီပေါနိုင်ငံသားတွေပေါ့ သူတို့က မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူး ဒီလိုလုပ်တတ်တယ်
မလေးမှာဆိုတော့ သူတို့ရွှေမကင်းမျိုးမကင်းတွေများတော့ အလုပ်ကိုင်လေး အဆင်ပြေပုံရမယ်
အဲ့သည် ငတိမတွေနဲ့ အခန်းထဲမှာ ဓားရေးယှဉ်တဲ့ ငါဘာညာကွိကွမသားတွေ က
( ဟင်းဟင်း ဥပဒေသစ်ကြောင့်မင်းတို့သက်သာတယ်မှတ် )
ခြောက် ( စား ) ဟောက် ( စား ) ကောင်တွေဖြစ်ပုံရတယ်
ကြည့်ရတာ အကောင်မတွေက နည်းနည်းလမ်းတဲ့ ဟို ငါဘာညာကွိကွမသား မြန်မာပြည်သားဖြစ်ပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှီပေါပြောတဲ့ ကိုယ်မေကိုယ် ဘာညာကွိကွတွေနဲ့ လမ်းကြောင်းတည့်တော့
ဒီကောင်တွေ ( ငတ်လာတော့ ) ထန်ပြီး လုပ်တယ်ထင်တာဘဲ
( လုပ်နည်းလုပ်ထုံးတွေ တစ်ပုံကြီးပါငါ့လူတို့ရာ ဘယ့်နှယ် ဒီလိုကြီးလုပ်ရတယ်လို့ )
သား တစ်ခုတော့ သံသယဖြစ်နေတယ်
ဒီလိုလုပ်တာကို သူတို့အနေနဲ့ မှန်တယ်လို့ခံယူပြီး ဒီလို အင်တာနက်ထဲ တင်တာလား?
တစ်ယောက်ယောက်က တင်တာလား ?
သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီကိစ္စကို ဖေ့စဘွတ်တွေဘာတွေနဲ့ ရှင်းထားတာတွေ မရှိဘူးလား?
ပြောရရင် အောင်မင်းလွန်ရာကျမယ် ရွှေဘိုသားရေ (တကယ်တော့ အောင်မင်း ဘယ်လွန်မလဲနော်၊ သူက မီးရထားဝန်ကြီးဖြစ်နေမှတော့ အမြဲမှန်နေမှာပေါ့)
ငါနေထိုင်ရာ အရပ်မှာလည်း ပြောမပြချင် စောရသခင် ထောလှအရှင် ဆိုတာလို လွပ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကို ဗန်းပြအလွဲသုံး အရည်ခြုံပြီး ကာမဂုံအာရုံ မှီဝဲနေပုံများ သဂျီးတို့ဇိမ်ဝါဒနဲ့တော့ ကိုက်မှကိုက်ပဲ။ ခေတ်အလျောက် လက်မထပ်ခင် အတူနေတာ အပြစ်မမြင်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ စည်းလေးတော့ ထားအုံးပေါ့။ မအိပ်ခင် နည်းနည်းတော့ တွဲသွားတွဲလာလုပ်ကြည့်ရမယ်၊ ပြီးမှ ကိလေသာချင်ထပါ။ အခုတော့ ခုမြင်ခုတွေ့ ခုအိပ်၊ နောက်တယောက်နဲ့တွေ့လည်း ဒီအချိုး။ ပိုဆိုးတာ မသိသူတွေကိုကြတော့ မြန်မာမိန်းခလေးပီသကြောင်းပြော၊ သိသူတွေကိုကြတော့ လွပ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆို၊ ကိုယ်အချင်းချင်း မိန်းခလေးတွေကိုကြတော့ ကိုယ့်လိုပဲ လိုက်စည်းမစောင့်အောင်မြောက်ပင့်ပေး (ဒါမှာ အပြစ်ဖုံးလို့ရမှာကိုး)။ ရှက်ရကောင်းမှန်း ကြောက်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိ၊ အမေပေးတဲ့ ယာတကွက် လူတိုင်းကို ပေးထွန်တော့တာပဲ။ ဒါကြောင့် သိပ်လည်း မြောက်မပေးကြနဲ့ဗျို့….။
“ အမေ ပေးတဲ့ ယာတကွက် လူတိုင်း ကို ပေးထွန် ”
ကောင်း၏ ဗျို့ဦးကြောင်ကြီးရာ အမေပေးတဲ့ ယာတစ်ကွက်ကို လူတိုင်းကဝိုင်းကူပြီးထွန်ပေးသွားကြပေသကိုး။